Uncategorized – JQY's Blog
ကြှနျတျော နမေယျလို့ရညျရှယျပွီး နောငျတောငျးကို ရောကျခဲ့တဲ့ရကျက ၂၀၁၁ သွဂုတျလ ၁၄ ရကျ စနနေပေ့ေါ့။ နောငျတောငျးဆိုတာက ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးကို အခွခေံထားတဲ့ စာသငျကြောငျး။ အားလုံးနားလညျတဲ့ အချေါနဲ့ဆို ဘုနျးတျောကွီးသငျ ပညာရေးကြောငျး။ တညျနရောက ရှမျးပွညျနယျထဲမှာ။ အရငျအစိုးရလကျထကျက စကားနဲ့ပွောရငျတော့ ရှမျးပွညျတောငျပိုငျး။ တောငျပိုငျးလို့ ပွောပွော ရှမျးပွညျလို့ ပွောပွော ခကျြခငျြးသတိထားမိလိုကျတာက တောငျကွီး။ နောငျတောငျးဘုနျးတျောကွီးသငျ ပညာရေးကြောငျးက
ပထမဦးဆုံး မွနျမာနိုငျငံ တဝနျးလုံးရဲ့ လကျရှိ ဖွဈပကျြနတေဲ့ ပွဿနာမြားကို ဖျောထုတျပါတယျ။ ဖျောထုတျပုံကတော့ Column ၃ ခုပါတဲ့ ဇယားလေးတခု ဆှဲခလြိုကျပါတယျ။ အဲဒီကျောလံ သုံးခုထဲက ပထမတခုမှာ Factor of peace ဒုတိယတခုမှာ Factor of conflict တတိယတခုမှာ Actor ဆိုပွီး ပါပါတယျ။ Factor of peace
ငါ​နေဖြစ်​တဲ့ ​ကျောင်း လှလို့
ပြောထားချင်တာက သင်တန်းတွင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤဂိမ်းများကို စုစည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့ ဂိမ်းသည် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ကစားဖူးသော်လည်း အချို့မှာ မြင်ဖူးရုံသာ မြင်ဖူးသည်။ အချို့ဂိမ်းဆိုလျှင် လုံးဝ မကစားဖူးပါ။ ဥပမာ ခြေထောက် ဆင်း၍ ခြေမကွေးဘဲ မတ်တပ်ထသည့် ဂိမ်းဆိုလျှင် လုံးဝ မကစားဖူးပါ။ ထို့နောက် ထိုဂိမ်းသည် ကစားလို့
လှူကြ ဒါန်းကြ ကြည်ညိုကြရာဝယ် (၆)
အရင် လှူကြ ဒါန်းကြ ကြည်ညိုကြရာဝယ် (၅) မှာတုန်းက ကျွန်တော် တစ်ခု လွှဲသွားတယ်။ အဲဒါကတော့ ဓမ္မဒါနနှင့် အဓမ္မဒါနကို တရားသဖြင့် အလှူနှင့် မတရားသဖြင့်အလှူလို့ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောမိသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တမ်း လှူသင့်သော အလှူ၊ မလှူသင့်သောအလှူလုိ့ ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်တယ်။ လှူသင့်တာက ထမင်း အဖျော် စသည်ပေါ့။ မလှူသင့်တာကတော့ သေချင်နေတဲ့လူကို
လှူကြ ဒါန်းကြ ကြည်ညိုကြရာဝယ် (၅)
ခုတော့ လှူဖို့ ဒါန်းဖို့ဆိုပြီး မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်တွေ ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူကြတာဆိုတော့ ဒါနအကြောင်း ပြောရာမှာ ကိုယ့်ဘက် ကိုယ်ယက်သလို ဖြစ်နေသလား မသိပါဘူး။ ဖြစ်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ပြောရမှာပဲ။ အလှူလုပ်ရာမှာ သဒ္ဓါပေါက်တဲ့အခါ လှူလိုက်၊ မလှူဘဲနေလိုက်ထက် ပဒေသာပင်စိုက်ထူထားတဲ့ အလှူက ပိုကောင်းပါတယ်။ ထာဝရဒါနလို့ခေါ်ရမှာပေါ့။ သူကတော့ သေချာတယ်။ သေရင် နတ်ရွာတစ်ခုခုကို လားရပါတယ်။ ဆရာတော်များ ဆုံးမကြတာက
ADMIN သုံးငွေရှင်းတမ်းနှင့် လှူဒါန်းခဲ့သည့် ပစ္စည်းများ
အခမ်းအနားနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှုစရိတ် (၁) ရေခဲမုန့် ………………….. ၃ စည် …………………….. ၈၀၀၀၀ (၂) ကိတ် …………………….. ၅၀ လုံး ……………………. ၃၀၀၀၀ (၃) ဂျူ့စီ …………………….. ၂၀ ပုလင်း …………………. ၂၇၀၀၀ (၄) တစ်ခါသုံးခွက်……………. ၇၀၀ ခွက် ………………….. ၁၀၀၀၀ (၅)